Goretti Irisarri naJose Gil Romero. Kubvunzana nevanyori veLa traductora | Zvazvino Zvinyorwa
Goretti Irisarri naJose Gil Romero. Kubvunzana nevanyori veLa traductora
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 11/09/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 12/09/2021 09:18 | Hurukuro, Vanyori, Mabhuku
Vanyori 'Twitter nhoroondo.
Goretti Irisarri naJose Gil Romero Ivo vanga vari vaviri vakasika kweanopfuura makore makumi maviri uye vakaburitsa mazita senge trilogy Vakafa vese (yakagadzirwa na Kupfura nyeredzi kudonha, Iyo Mechanism yezvakavanzika uye Guta Rakakomberedzwa), Semuyenzaniso. Muturikiri Ndiyo bhuku rake rekupedzisira uye rakangobuda mwedzi uno. Ndinokutendai zvikuru nguva yako uye mutsa kunditsaurira iyi hurukuro-maoko maviri uye kuratidza kuti vanoita zvakanaka.
Goretti Irisarri naJose Gil Romero - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Muturikiri ndiyo nyowani yako nyowani. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
JOSE GIL ROMERO: Iyo yenhau ngano na chii chingave chakaitika mukunonoka kwemaminetsi masere nayo iyo Chitima chaFranco iye akasvika pa kusangana neanorova muHendaye. Kubva pachiitiko icho chaicho tinogadzira rudo nyaya uye kufungira, nyeredzi muturikiri, mukadzi asina hushingi, asingadi asi kugara murunyararo, uye anobatanidzwa muchirongwa cheusori.
GORETTI IRISARRI: Isu takanakidzwa nepfungwa yekuisa iye protagonist akararama zvakanyanya kusagadzikana pachitima chinomhanyisa icho, iwo mufananidzo wemu cinematic uye isu takabva tangofunga nezvazvo Hitchcock, mune iwo mabhaisikopo aunotanga kuona uye haakurege uchienda.
AL: Unogona kudzokera kubhuku rekutanga iro rawaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawakanyora?
GI: Kwandiri ndakatanga naTolkien, Iyo Hobbit, kana hazvo bhuku rekutanga randinorangarira. Zvaive sekuwana mushonga uye ini handina kumbomira.
JGR: Verenga zvimwe rimwe bhuku ra Vashanu, iyo hanzvadzi yangu yaizove nayo pasherefu. Asi pasina kupokana chii chakaratidza hudiki hwangu, uye ini ndingati hupenyu hwangu, hwaive Hom, naCarlos Giménez kana tiine ruzivo Uye nyora ... zvirokwazvo iyo script yeimwe yeaya ma comics andakatora senge achiri kuyaruka, iyo yaive nyaya dzinotyisa nezvikara, zvakakanganiswa zvakanyanya neiyo vatorwa naJames Cameron uye nemhedzisiro yemafirimu aDavid Cronenberg.
AL: Munyori mukuru? Iwe unogona kusarudza anopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
JGR: Gore inoverengwa kupfuura ini (kuseka). Asi kune zvakawanda ... García Márquez naGaldós, Horacio Quiroga naStefan bazi, Perez Reverte naEduardo Mendoza, Bukowski...
GI: Ndiri kutyora pfumo revasikana. Ini ndaizoisa ruoko rwangu pamoto chero chinhu kubva kuSei Shonagon, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Susan Sontag kana surfer ane mukurumbira, Agatha Christie...
GI: Zvakakomba, Agatha anga ari piyonaKune mimwe mifananidzo yake inotonhorera aine bhodhi rinobata mafungu.
JGR: Ndingadai ndakada kusangana ne mutorwa urikutsvagei Gurb.
GI: Mubvunzo wakanaka! Zvakanaka ndingadai ndakada gadzira pa zvakawanda zvisinganzwisisike governess ye Imwe kumonyoroka. Kana kuri kuziva ... kuna kaputeni nemo, uye kuti akanditora kwekushanya kushoma kwezasi kwechikepe cheVigo, icho chiri pachena kuti chaivepo.
GI: Usati wanyora tsvaga mifananidzo. Kuti ndiende kunzvimbo itsva ndinofanira kuona mifananidzo ndiise mumamiriro ezvinhu, zvinosetsa kupfeka mazano, chimwe chakatarisana kumeso.
JGR: Kuverenga, hapana chinouya mupfungwa izvozvi ... uye tarisa, ndiri maniac! Ah hongu, tarisa: Ini ndinowanzo tenga yakawanda yechipiri ruoko, Zvakanaka, handigoni kutsungirira kutsvaga mumwe munhu achitsikirira mubhuku. Meso angu anoenda kumavara aya ayo mumwe akawana anonakidza uye zvinondikanganisa, zvinondikanganisa. Ndakati, maniac (anoseka).
AL: Uye iyo yakasarudzika nzvimbo uye nguva yekuzviita?
JGR: Kuti uverenge, hapana mubvunzo usati warara, in the mubhedha.
GI: Ndine tambo yakamonyoroka yekuverenga uko kune ruzha rukuru, senzira yepasi pevhu. Ndinoda iko kusungwa kunondimanikidza, ndinozvinyudza zvakanyanya.
GI: Ini ndinoda chaizvo zvinonzi literatura zvemhando, kune zvese kuverenga nekunyora. Kunyora zvakanaka kuti pane mitemo inokukiya, zvikanganiso zvakaita seizvo zvinotsanangura mhando. Kugadzira kunoshanda zvirinani. Iko kune zvakanyorwa naLars von Trier, Mamiriro mashanu, iyo inozvitsanangura chaizvo chaizvo: Von Trier anodenha munyori wefirimu pfupi kupfura shanu remakes yeiyo ipfupi, uye nguva imwe neimwe ichave ichiisa iyo yakaoma, isingakwanise mamiriro. Asi chinotyisa ndechekuti Lars Von Trier paanomuudza kuti panguva ino haaise chero mamiriro pazviri: anosiya munyori murombo asina kudzivirira pamberi pegomba rakadzika, iro rerusununguko rwakazara.
JGR: Mhando zhinji uye dzakasiyana, asi… ehe, kumwe kutamba. Ini ndaisatomboverenga mabhuku asiri echiSpanish. Zvinoita kuti ndinetseke kufunga kuti shanduro yandiri kuverenga haizove yakakwana uye kuti izvi zvichakanganisa kuverenga kwangu. Ipfungwa ine hunyanzvi, ndinoziva, uye ndakave nekunakidzwa kwakawanda kuchipa kune hunhu kubva Muturikiri, iyo inotaura chimwe chinhu senge "Ini handivimbe nemhando yeshanduro yandichawana."
GI: Ndiri kuverenga Iyo yekunzwa nzira yeMadrid, ivo Carrere, rakadzokororwa naLa Felguera. Emilio Carrere, munyori we Shongwe nomwe dzekuvhima shongwe, Akanga ari hunhu hunoshamisa, mudetembi ane hushoma uye wechiBohemian, uyo mushure mehondo akagamuchira hutongi hwaFranco. Ndiye mumwe weavo literati vane pfungwa isiri nyore kunyora. Vhura Muturikiri anobuda achidzokorora nhetembo pawairesi, kwaaive nemukurumbira. Nhetembo iyi irumbidzo kuvaNazi vanopinda muParis, Paris pasi pe swastika.
Isu taifarira kwazvo kuratidza iyo hotbed yenguva yacho, apo zvese zvainge zvisina kujeka sezvazvino uye paive nevakadzidza vaiyemura Nazism. Semuenzaniso, kwaive neratidziro hombe kuCírculo de Bellas Artes pane iro bhuku reGerman, iro rinoonekwawo munoverengeka. Zvisinei, pane iwo mafoto ane swastika hombe akarembera pamadziro eDenderedzwa ... Nyaya yacho ndeiri.
JGR: Ndiri kuverenga Iyo gamba ine chiuru kumesonaCampbell. Ndinoda chaizvo kudzidzira. Ndakaverenga zvakawanda nezve maitiro enhoroondo uye akadaro, kuti ndione kana ndikadzidza zvishoma (kuseka)
Nezve izvo zvatiri kunyora, isu tichangopedza bhuku uye isu takagutsikana. Ndinovimba tinokwanisa kupa nhau nezve kuburitswa kwayo, munguva pfupi.
JGR: Zvakanaka, ini ndaizotaura zvirinani kupfuura nakare uye ini ndaizotaura zvakaipa kupfuura nakare kose. Ndiri kureva kuti yakaburitswa yakawanda, yakawanda, asi mune yakashata mamiriro: nguva dzekushandisa dzakapfupika uye makwikwi anotyisa. Kune vanhu vazhinji vakanaka vanonyora mabhuku makuru uye muverengi haana kana nguva uye kugona kuvasarudza. Mazhinji evapari vacho anonyangarika munzira kana kutombozviita. Uye zvinoshamisa kufunga nezve vanhu vangani vane tarenda vari kunze uko, vakapambadza.
GI: Iniwo ndinofunga iyo nzira nyowani yekuteerera nekuona ngano inorema zvakanyanya, kunyanya nhepfenyuro yeterevhizheni, izvo zvave zvakanyanya kunyora uye zvinotarisira zvakanyanya kusimudzira kwevatambi kana kutsvaga kwenyaya. Uye ivo vari makwikwi akasimba, nekuti iyo nguva yaunopedza uchiona zvitsauko uye zvitsauko zvemakateedzana haushandise kuverenga.
JGR: Idzi inguva dzakaoma. Kune vanhu vazhinji vanotambura kana vakatambura. PKudivi redu, isu tinogona chete kuunza zororo, nzira diki yekubuda mukutambura ikoko. Zvimwe zvacho zvinotaurwa nezvazvo mu Muturikiri zvakare: kubva ku nzira yeruponeso iyo mabhuku anofungidzira vanhu uye, mune iyo pfungwa, iyo novel ndiyo mutero kune zvinyorwa. Ndinovimba, kunyangwe kwenguva diki, vaverengi vedu vanozotiza nekutenda kwatiri. Izvo zvingave zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Goretti Irisarri naJose Gil Romero. Kubvunzana nevanyori veLa traductora
José Javier Abasolo. Kubvunzana nemunyori weiyo Original Version
Kunyora sei nhetembo